समिर खानको रहस्यमय मिर्त्यु लाइ बुझ्न आयोग अध्यक्ष परासिमा । – Nepali news portal
समिर खानको रहस्यमय मिर्त्यु लाइ बुझ्न आयोग अध्यक्ष परासिमा ।
१६ असार २०७६, सोमबार ०९:३१ July 1, 2019 पर्वत डेष्क
गत शनिबार असार ७ गते राति रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर २ का २६ बर्षिय समिर खान को रहस्यमय मिर्त्यु लाइ जिल्ला प्रहरि परासिले ब्यवास्ता गरेको भन्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारि बर्दघाट सुस्ता पुर्ब नवलपरासिको परासिमा पुगेका छन । गत शनिबार आफ्नै भाइको बिबाह सकेर घर बसिरहेका समिर खानलाइ उनका तिन जना साथिहरु जग्दिस , सुरज हलवाइ र केदार नाम गरेका साथिहरुले रातको समयमा काम छ भन्दै बोर्डर नजिकको ठाउ बैरवामा कल मार्फत बोलाएसि उनि गएनन पछि केदार नाम गरेका युवा करिब ७ बजे बेलुका घरमै लिन आएसि उनि घरबाट निस्केका समिर अन्तः घर फर्केनन ।
बेलवा को एक साबित्री यादब होटेलमा केहि ध्रुमपान र मदिरापान गरेर निस्केका समिर सहित ४ जना मध्य समिर खानको मात्र मिर्त्यु भएसि घटना सङ्कास्पद रहेको भन्दै पिडित परिवारले किटानि जाहेरि दिएका छन । घटना भएको भन्दा तिन किलोमिटर अगाडि एक नहरमा रगतका टाटाहरु र ठाउठाउमा रगत भेटिएपनि प्रहरि प्रशासन अझै मौन रहेको छ ।
केदार नाम गरेका समिरका साथिले नशालु पदार्श सेवन गरेका ति युवाले राति करिब १० बजे समिरको बुवालाइ दुर्घटना भएको मोबाइल मार्फत बताएका थिए र समिर घानलाइ भैरहवा मेडिकल कलेज लग्दै गर्दा बाटोमा उनको मिर्त्यु भएको थियो । समिरका साथिहरुले मोटरबाइक दुर्घटना परि मिर्त्यु भएको भनेता पनि अहिले सम्म दुर्घटना मा परेको मोटरबाइक भने अहिले सम्म प्रहरिले फेला पारेको छैन । जिल्ला प्रहरि कार्यलय परासिमा फर्जि बाइक दिएको त्यहाका एक प्रहरि ले बताएका छन ।
दुर्घटना परेका भनिएका समिर घानको गर्दन भाचिनुका साथै निधार टाउको हात र खुटामा ठुला ठुला डामहरु भेटिएका थिए । पिडित परिवारले किटानि जाहेरि गर्दा पनि प्रहरिले उक्त घटना लाइ गम्भिरता नदिएको हुनाले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया आफै पिडितहरुलाइ भेटन आएको बताउदै यस घटना लाइ गम्भिरता पुर्बक छानबीन गर्न प्रहरि सङ्ग अनुरोध गरेका छन । प्रहरिले हाल सम्म एक ब्याक्ति सुरज हलवाइ लाइ मात्र पक्राउ गरेपनि बाकिका ब्याक्तिलाइ भने धरपकट नगरि बसेको हुनाले मिर्तकका बुवा मुख्तार अलिले आफुलाइ न्याय दिलाउन आयोग अध्यक्ष लाइ गुहारेको बताएका छन । यतिखेर परासि जिल्लामा समिर घानको घटनाको प्रश्नलाइ लिएर परासिका जनता आन्दोलना उत्रने तयारिमा रहेका छन ।
प्रकाषित सोमबार १६ असार, २०७६ ## समिर खानको रहस्यमय मिर्त्यु ## ###
एलआईसी नेपालले कुश्मा शाखाका एजेन्सी म्यानेजर गोबिन्द अधिकारी सम्मानित
पूर्वसभामुख महरालाई अदालतद्धारा सफाइ
आज मिति २०७६, फाल्गुन ५ गते सोमबार को दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
महाशिलामा राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता–२०७६
आज मिति २०७६, फाल्गुन ४ गते आइतबार को दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
आज मिति २०७६, फाल्गुन ३ गते शनिबार को दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
समयमा विधुत नदिएपछि माउण्टेन हाइड्रोलाई प्राधिकरणको जरिवाना
जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, जनताको जनवादमा सहमति !
बुजुर्गहरूले राम्रो लाभको लागि आफ्नो अतिरिक्त ऊर्जाको सकारात्मक प्रयोग गर्न आवश्यक छ। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। आज तपाईं उपस्थित हुने एउटा सामाजिक सभामा आकर्षणको केन्द्र बन्नु हुनेछ। आफ्नो प्रियको निष्ठामा शङ्का नगर्नुहोस्। साँझ देरीसम्ममा टाढाबाट राम्रो खबर आउने सम्भावना छ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द - किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। कसैका लागि - परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक माग पूरा गर्न हरेस नखानुहोस्। खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
तपाईंले आज गरेका केही शारीरिक परिवर्तनहरूले तपाईको ढाँचामा पक्कै बृद्धि हुनेछ। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। अनपेक्षित सुसमाचारले तपाईंको हौसला बढाउनेछ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग समाचार सुनाउनाले उनीहरू पनि खुशी हुनेछन्। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो। जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईंको परिवर्तित मनोवृत्तिले तिनीहरूलाई असीमित आनन्द दिनेछ। आफ्नो प्रेमीलाई मन नपर्ने लुगा नलगाउनुहोस् किनकि यसले उनको चित्त दुखाउनेछ। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। तपाईं किराना मालको किनमेल गर्दा आफ्नो जोडीसित रिसाउन सक्नु हुन्छ।
तनाउलाई बेवास्ता गर्नु पर्दैन। यो तीव्र गतिमा सुर्ती र रक्सी झैं गम्भीर रूपमा एउटा महामारी बन्दैछ। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। आफ्नी प्रियतमालाई बुझ्ने गर्नुहोस्। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ।
मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। पत्नीका मामिलाहरूमा तपाईंको हस्तक्षेपले उनलाई उन्मादी बनाउन सक्छ। रीसबाट जोगिनको लागि उनको अनुमति लिनुहोस्। तपाईं सजिलैसँग समस्याबाट जोगिन सक्नु हुनेछ। नयाँ प्रेम जडान गठन गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ तर व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित राख्न सक्छ।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। आफ्नो जिद्दी स्वभावले तपाईंको आमाबाबुको शान्ति भंग पार्न सक्छ। तपाईंले तिनीहरूको सल्लाह पालन गर्नु आवश्यक छ। गालीबाट बच्नको लागि आज्ञाकारी हुनु उचित छ। एउटा रमाइलो जीवनसाथी हुँदा तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भनेर आज थाहा पाउनु हुनेछ।
आफ्नो बच्चाको कार्यले तपाईंले धेरै खुशी दिन सक्छ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ - र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। साँझमा चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। तपाईंको प्रिय रोमान्टिक मुडमा हुनेछन्। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। आनन्दित - ऊर्जावान र मायालु मुडमा तपाईंको हंसमुख प्रकृतिले आफ्ना वरिपरि आनन्द र खुशियाली ल्याउँछ। आज तपाईंको प्रेम साझेदारले तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर वस्तु दिनेछ। तपाईंलाई आज लामो समय पछि आफ्नो जोडीबाट साँच्चै मायाले भरिएको र न्यानो अंगालो प्राप्त हुनेछ।
आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
तपाईंको व्यक्तिगत समस्याले मानसिक आनन्द बर्बाद गर्न सक्छ तर आफैलाई यी दबाबबाट बचाउनको लागि रोचक कुराहरू पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। परिवारका केही महिला सदस्यको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता हुन सक्छ। तपाईंले कुनै वनभोज स्थलमा गएर आफ्नो प्रेमी जीवनलाई रोशन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। कुनै पुरानो मित्रले साँझ तपाईंलाई फोन गरेर घरको सम्झना दिलाउन सक्छ। आजको दिन खुशी र आनन्दले भरिएको सुंदर सन्देशले भरिएको छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
दक्षिण भारतको चेन्नाईमा बाग्लुङ्गका ढकाल वेखवर
आज मिति २०७६, माघ २२ गते बुधबारको दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
आज मिति २०७६, माघ २४ गते शुक्रबारको दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
जन्मदिनको खर्च कटाएर छात्रछात्रलाई पोसाक
मिहिनेत, परिश्रम र लगनशिलताले मात्रै कृषिको आधुनिकिकरण सम्भव छ–नेकपा केन्द्रिय सदस्य गुप्त हमाल